သံတော်ဆင့်အယ်ဒီတာချုပ် (ကြံခိုင်ရေးပါတီ ) မှ ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင် နှင့် အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်အား ရန်တိုက်ပေး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မသီတာ (စမ်းချောင်း) “အာဏာရှင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြန်သွားချင်နေကြတာလား?”
It is best for ALMOST ALL or 99% of Muslims FROM Myanmar support DASSK…But allow me to act asaVILLAIN to hit her sometimes »
သံတော်ဆင့်အယ်ဒီတာချုပ် (ကြံခိုင်ရေးပါတီ ) မှ ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင် နှင့် အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်အား ရန်တိုက်ပေးပြီး
ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့် အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရား တို့ အားလျှောက်ထား တင်ပြခြင်း ရခိုင်ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးေ ခါင်းဆောင် များအား မြန်မာသံတော်ဆင့် နှင့် အင်တာဗျူး (အတွဲ ၂-အမှတ် ၄၇-ဖေဖော်ဝါရီလ၁-၇-၂၀၁၄ ခုနှစ်)စာမျက်နှာ ၂၃-ကော်လံ ၅ တွင် ကြံခိုင်ရေး (မြေအောက်) ပိုင်ဂျာနယ် သံတော်ဆင့်မှ အင်တာဗျူး တစ်ခု အစပြု၍ စိတ်ဝမ်းကွဲစေလောက်သည့် အရေးအသားဖြင့် ရန်တိုက်ပေးကာ ရခိုင်တို့ ၏စည်းလုံးညီ ညွတ် ရေးကို ဖြိုခွင့်လာခဲပြီ သက်ဆိုင်သူ ရခိုင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် များ နှင့် ရခိုင့်နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ ညာဏ်ပညာဖြင့် ချက်ချိန်ပြီး အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအား လုပ်ဆောင်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။
သံတော်ဆင့်အေဒီတာ ဦးကျော်ဇော်ဝင်း သည် ရခိုင်တို့ ၏ညီညွတ်ရေး ကို ဖြိုခွင့်ရန် အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားရေးသားဖူးသည် ကြံခိုင်ရေး ၏ ကေဘာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည် စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ယောက်၏ကျင်ဝတ် ကိုချိုးဖေါက်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ရေးသားမှူကြောင်း ဘာသာရေး၊နိုင်ငံရေး ရခိုင်ခေါင်းဆောင်အချင်းချင်း တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ထင်ယောင် ထင်မှား ဖြစ်စေခဲပေမည် ဦးကျော်ဇော်ဝင်း ၏ရန်တိုက်ပေးသည့် အရေးအသားကြောင်း ရခိုင်အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲ မည်ဆိုပါက မဟာအမှားကြီးမှားနေပါလိမ်မည်။
ရခိုင်တို့ ၏ အနောက်တံခါးအား ဘာသာရေး၊နိုင်ငံရေး ပူးပေါင်းကာကွယ်မှ ခိုင်ခန့်ပါလိမ်မည် ဟုယုံကြည်ပါသည် တပည်တကာ ဆရာတပည့် ညီညွတ်စွာဖြင့် ရှိသင့်သော အချိန်ကာလ ပင်ဖြစ်ပေသည် သွေးခွဲလာသူ ကို လည်း သိရှိလေအောင် ရှာဖွေစုဆောင် တင်ပြအပ်သည်။
အောက်တွင်လည်း အရှင်ကုမာရဖဘဝေါလ်နှင့်အလိုတော်ပြည့်ဝတ်ဆိုက် တွင် တခါမှ မကြားဖူးသော ရခိုင်အမျိုးသားကောင်စီ(မြန်မာနိုင်ငံ )စတိတ်မတ်တစ်စောင်အား ကြည်ရူးရာ မှ ဤစာသည် အသွာအလာ ကာ ရန်စောင်းရေးလာသည် ဖြစ်၍ ရခိုင့်အမျိုးသားသွေး စည်းညီညွတ်ရေအတွက် မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်သော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု အကျွန်ုမှတ်ယူ ပါသည်။
သံတော်ဆင့် ဘာလဲဆိုတာ ကိုအောက်တွင်ပူးတွဲတင်ပြလိုက်ပါသည် ရခိုင်ခေါင်းဆောင်များပညာညာဏ်ဖြင့် အမျိုးသားရေးသတိဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို လုပ်ဆောင်ကြပါရန် ရိုသယ်စွာတိုက်တွန်းလျှောက်ထားတင်ပြအပ်ပါသည်။
အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော် နှင့် ဒေါက်တာအေးမောင် အား ရန်တိုက်ပေးသည့် ကြံခိုင်ရေးမြေခွေး (ဦးကျော်စွာဝင်း)
ဦးကုမာရ ၏ တင်ဆက်ပုံအား အောက်ဝင်ရောက်ကြည်ရူနိုင်သည်။
ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်ခင်ညွန့် ကိုးကွယ်ခဲ့သည့် အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော် သည် RNDP ကို တိုက်ခိုက်ကာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက် မဲဆွယ်ပေးနေကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်
သံတွဲ ၊ ၀၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၄ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင်း ]
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်န၀ါရီလအတွင်းက ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲခရိုင်တွင် မိမိ၏ ညီတော် သံဃာများအနေဖြင့် ကွန်မြူနစ်များ ၀ိုင်းရံနေသည့် RNDP ပါတီ နှင့် ဆက်စပ်ခြင်း ထောက်ခံအားပေးခြင်း လုံးဝမပြုကြဖို့ကို သာသနာရေးဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်၏ ရှေ့မှောက်တွင် ပြောကြားပြီး လက်မှတ်ရေးထိုး ကတိပြုကြရန် အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်က တိုက်တွန်းခဲ့သည့်အတွက် အခြားသော ဆရာတော်များနှင့် သဘောထားကွဲလွဲမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၏ ရခိုင်ပြည်နယ် စည်းရုံးရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဖုန်းဆွေ နှင့် နီးကပ်သည့် ဆက်ဆံရေးများ ရှိနေသည့် အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော် သည် စစ်ထောက်လှမ်းရေးဓါးထက်စဉ်ကာလက စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်၏ ကိုးကွယ်မြှောက်စားမှုမှစတင်ကာ နာမည်ကြီးလာခဲ့သည့် ဆရာတော်ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းသည့်အကြောင်းကို RNDP ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင် နှင့် သံတော်ဆင့် ဂျာနယ် တို့ အင်တာဗျူးတွင် ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောကြားထားသော်လည်း အဆိုပါဆရာတော်မှာ အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ကြောင်းကို ၄င်းက ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခြင်း မရှိချေ။ သို့ရာတွင် အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော် ထိုကဲ့သို့ပြောကြားသည့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း များ ရှိနေကြောင်း ပြောကြားစဉ်က ရှိနေခဲ့သည့် မျက်မြင်သက်သေများက ဆိုသည်။
ဒေါက်တာအေးမောင် က သံတော်ဆင့်ဂျာနယ်အား အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“သံတွဲ ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ပြည်တွင်း ပြည်ပ သာသနာပြုပုဂိ်္ဂုလ်က တိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးရှေ့မှောက်မှာ ကျွန်တော် တို့ကို အားမပေးဖို့ သံဃာတွေကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်း တယ်ဆိုတဲ့ သဘောကြားရတယ်။ မေးကြည့် တဲ့အခါမှာ တော့ အဲဒီသဘောဆန်တယ်။
“ပုလဲရတနာ ဆရာတော်ဘုရားကတော့ သူကလက်မခံဘူး။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီကို ကွန်မြူနစ်တွေ ၀ိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ပြောပြီးတိုက်ခိုက်တာ ရှိတယ်။ လာမယ့် ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာမှာ ကျင်းပနိုင်ဖွယ် ရှိတဲ့ ရွေးချယ်ပွဲမှာ တောင် ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းအင်အားပြိုင်ချင်တဲ့ ပြိုင် လိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေတယ်။ အမျိုး သားလိုင်းတစ်ခုကို ကိုယ့်ပြည်နယ်အစိုးရ ကို ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နိုင်မှဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက် နဲ့ သွားတဲ့အခါမှာ အခုလိုမျိုး စုန်းပြူးတွေရှိ တာပေါ့။ သံဃာထုကလာတဲ့၊ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းတွေကလာတဲ့၊ လက်နက်ကိုင်အ ဖွဲ့အစည်းတွေက လာတယ်။ ပါတီထဲက လည်းလာတယ်။ သတိတရားကြီးစွာနဲ့ ရခိုင်လူထုက စောင့်ကြည့် နေကြတယ်။ သံဃာထုကလည်း စောင့်ကြည့်နေတယ်။”
အဆိုပါဖြစ်ရပ်မှာ လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ခြောက်မြို့နယ်တွင် RNDP ပါတီအား ပြည်ခိုင်ဖြိုးက အနိုင်ရစေရန် ဦးဖုန်းဆွေ၏ စတင်ရည်မှန်းလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်နေကြသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၏ ရခိုင်ပြည်နယ် စည်းရုံးရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဖုန်းဆွေသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသား ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်များ၏ ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်လျက် (၄င်းတို့အား ဆူပူ ငေါက်ငန်း မာန်မဲကာ) ဘူးသီးတောင် မောင်တောနယ်တွင် ဦးရွှေမောင် အပါအ၀င် ကုလားအမတ်များကို ကိုယ်စားလှယ်တင်ရန် စီမံခဲ့သူဖြစ်သည်။ White Card ကိုင်ထားသော ကုလားများကို မဲပေးခွင့်ပေးဖို့ စီမံပေးခဲ့သူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရခိုင် မြတ်မုနိ ဘုရားအား မွမ်းမံပြုပြင်ခြင်း ပရောဂျက်များတွင် အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော် ပါဝင်ခဲ့သည်တို့မှာ စစ်အစိုးရညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ရခိုင်ပြည်၊ ရခိုင်လူမျိူး နှင့် ရခိုင်ဘုရား၊ ရခိုင်အောင်မြေ တို့အား နံနှိပ်ရန် ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်လုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အရပ်သတင်းစကားများ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော်လည်း၊ ထိုအကြောင်းကို အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိချေ။
RNDP ၏ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းထဲတွင် ဟိုးယခင် ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက BCP လက်အောက်တွင် လှုပ်ရှားဖူးသူ ဦးဦးလှစော၊ ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ACP) ၏ မင်းပြားမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ကာ ထောင်ဒဏ် (၂၂)နှစ် ကျော် ကျခံဖူးသူ ဦးခိုင်ပြည်စိုး၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲလှုပ်ရှားကာ မကြာသေးခင်က ပုဒ်မ(၁၈)ဖြင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရသူ ဦးကျော်ဇောဦး တို့အပြင် အခြားသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ ပါဝင်ကြသည်။
အဆိုပါခေါင်းဆောင်များမှာ ယနေ့လက်ရှိတွင် ကွန်မြူနစ်အယူအဆများကို ကိုင်စွဲထားခြင်းမရှိဘဲ RNDP ၏ ရခိုင်အမျိူးသားရေးလမ်းစဉ် အတိုင်းလုပ်ကိုင်နေကြသည်ဖြစ်သော်လည်း တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် လုပ်ရဲကိုင်ရဲသည့် မည်သူ့ကိုမဆို ဆန့်ကျင်ဘက် နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းက ကွန်မြူနစ်များ ဟု တံဆိပ်ကပ် စွပ်စွဲကြခြင်းဖြစ်သည် ဟု RNDP ဗဟိုကော်မီတီဝင် တစ်ဦးက Coral Arakan News အား မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားသည်။
( Coral Arakan News အတွက် သောင်းကြွယ် ရေးသားသည်။)
This entry was posted on February 19, 2014 at 9:40 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.